Facebook Messenger Lite မှဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများစတင်မိတ်ဆက် Androidsis
အပလီကေးရှင်း Lite ဗားရှင်းများသည်အလွန်အသုံးများလာသည်။ဎ။ ၎င်းသည်ပိုမိုနိမ့်သည့်ဖုန်းများသို့မဟုတ် RAM နည်းသောသူများအတွက်ပိုမိုပေါ့ပါးသည့်ဗားရှင်းများဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၎င်းတို့သည်လျှောက်လွှာကိုနှစ်သက်နိုင်သည်။ သို့သော်နေရာနည်းသွားပြီးအရင်းအမြစ်နည်းပါးသောဗားရှင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ ငါတို့ရှိသည်ဤကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်မှုများထဲတွင် Facebook Messenger ကို Lite.
အလွန်အသုံးဝင်သောပေါ့ပါးသည့်ဗားရှင်း။ သို့သော် Mark Zuckerberg ၏ကုမ္ပဏီတွင်၎င်း၏အက်ပလီကေးရှင်းများကိုအလားတူလုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့်ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်ထူးခြားသောအရာတစ်ခုရှိသည်။ ဒါကြောင့် Facebook Messenger Lite တွင်ချက်တင်စကားပြောဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများရှိလိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်.
ဤသည်ပြီးသားဖြစ်ပျက်ကြောင်း update ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့သူတို့ဖုန်းမှာ application ထည့်ထားသူတိုင်းဒီ function အသစ်ကိုဘယ်လိုရပြီဆိုတာမြင်ရလိမ့်မယ်။ သင်၌မရှိသေးပါကလာမည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ယခု မှစ၍ Facebook Messenger Lite ၏ထိပ်တွင်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအိုင်ကွန်ပေါ်လာမည်။ အထူးသဖြင့်စကားပြောစကားဝိုင်း၏ညာဘက်အပေါ်ပိုင်းတွင်။ ဒါကြောင့်သင်စတင်ရန် icon ကိုနှိပ်ပါ။ အခြားသူကတောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံသည်အထိ၎င်းကိုစတင်အသုံးမပြုပါ။
ဒါကအငြင်းပွားဖွယ်ရာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပါ။ Facebook Messenger Lite ၏အယူအဆသည်ပေါ့ပါးသည့် application ဖြစ်သည်၎င်းသည်အလေးချိန်အနည်းငယ်သာရှိပြီးသုံးစွဲသူများ၏ဖုန်းများအတွက်အနည်းငယ်သာစားသုံးသည်။ ဒါကြောင့်ဒီ function ကိုမိတ်ဆက်လိုက်တာကဒီ function နဲ့လုံးဝမတူဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတွေကအရမ်းကြီးလို့ပါ။ အနိမ့်ဆုံးဖုန်းတွင်အရင်းအမြစ်များစွာကိုအသုံးပြုသောအရာ
အဆိုပါအမှန်တရားဖြစ်ပါတယ် သူတို့ကအနိမ့်ဆုံးဖုန်းတွင်မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်ခြင်းရှိမရှိကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော်ဤကဲ့သို့လုပ်ဆောင်မှုကို Facebook Messenger Lite တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခြင်းသည်ထူးဆန်းသည်။ ဤဗားရှင်းသည်အရင်းအမြစ်အနည်းငယ်ကိုသုံးစွဲရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Facebook Messenger Lite တွင်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများပါရှိသည်